कतारबाट आयो खुसीको खबर – अब कतार जान झनै सजिलो ! - Thulo khabar
कतारबाट आयो खुसीको खबर – अब कतार जान झनै सजिलो !
काठमाडौं : कतारले आफ्नो देशमा आउने बिदेशीहरुलाई लागु हुने यात्रा नीति परिवर्तन गरेको छ । कतारको नयाँ नीति अनुसार खो’प लगाएर आएपनि विदेशी पर्यटकहरुले अनिवार्य
दुई दिन होटल क्वा’रेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम सहितको नीति लिएको छ । कतार सरकारको नयाँ नीतिसँगै अब खोप लगाएकाहरुले कतारमा १० दिने होटल क्वा’रेन्टाइन बस्नु पर्दैन, २ दिन मात्र बसे पुग्छ ।
नयाँ नीति अनुसार २ दिन होटल क्वारे’न्टाइनमा बसेकाहरुले होटल छाड्नुअघि अनिवार्य पी’सीआर परीक्षण रिपोर्ट भने पेस गर्नु पर्नेछ । रिपोर्टमा नेगे’टिभ देखिए वा एण्टिबडी टेस्टमा पोजि’टिभ देखिए मात्रै निर्वाध हिँड’डुल गर्न दिइने हामद मेडिकल कर्पो’रेशनले जनाएको छ ।
नयाँ नियम कतार बाहिरबाट यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको खोपहरू लगाएका आफ्ना नागरिकमा पनि लागु हुने कर्पोरेशनले जनाएको छ । कतारले नेपालसहित बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र श्रीलंकालाई उच्च जो’खिम भएका देशहरूको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ ।
कतारको यो नयाँ यात्रा नीतिसंगै अब नेपालमा खोप पूर्ण डोज खोप लगाएका र यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको खोप लगाएका नेपालीले कतार प्रवेश गर्दा १० दिने होटल क्वारे’न्टाइन बस्नुपर्ने बा’ध्यता हटेको छ । यो नीति लिने निर्णय भएपनि कहिलेदेखि यो नियम लागू हुन्छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन ।